NLD YOUTH LA MALAYSIA: June 2012
By မဆုမွန် voa
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 3:47 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဗြိတိန်ပါလီမန်မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
ကျမ အဖေကို လက်တွေ့သမားလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆလင်းက ယုံကြည်ပြီး လက်တွဲလုပ်နိုင်မယ့်သူလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ အခု အနှစ် ၆၀ ကျော်လာတဲ့ အခါမှာ ကျမလည်း ဖခင်ကြီးလို လက်တွေ့ကျကျ လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလို လာရောက်ပြီး လက်တွေ့အကူအညီပေးဖို့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဒိုးတူပေါင်ဖက် လာရောက် ပြောကြားနေတာပါ။ အခွင့်အရေးတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ အတွက် ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ကူညီထောက်ခံကြဖို့ ကျမပြောလိုပါတယ်
လွတ်လပ်ရေး ရပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ တနိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အချိန် မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင်ဘဲ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ ကချင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ တပ်မတော် အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း လူထုအတွင်း အဓိကရုဏ်တွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ သေကြေခဲ့ရတဲ့ အပြင် ထောင်သောင်းချီပြီး ရပ်ရွာစွန့် ထွက်ပြေးနေရတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိန့်ခွန်းကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမှာ ရှမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မြန်မာ အစိုးရတပ်တွေ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ကြားရပါတယ်။ ကျမတို့ အနေနဲ့ ဒီပြသနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ရှာပြီး ဖြေရှင်းကြရမှာပါ။ နှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းပြီး နိုင်ငံရေး အရ အဖြေရှာတဲ့ ဓလေ့ကို ထွန်းကားအောင် လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေ အားလုံး လွတ်လပ်လုံခြုံစွာ နေခွင့်ရစေမယ့် ဥပဒေရဲ့ စိုးမိုးမှုဆိုတာကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးကြရပါလိမ့်မယ်
ကျမ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေစဉ် ကာလတွေ အတွင်းမှာလည်း ဘီဘီစီတင်မက ကမ္ဘာ့အသံလွှင့်ဌာနတွေဟာ ကျမကို ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ မိုးဇက်နဲ့ ရာဘီရှန်ဂါရဲ့ ဂီတ၊ လူမျိုးဘာသာ ပေါင်းစုံက အမျိုးသမီး အမျိုးသားတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် စတာတွေကို ကြားနေခဲ့ရတာ ကျမ အတွက် ဒီ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုမှာ အထီကျန် တယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဖြေသိမ့်စေခဲ့ရပါတယ်
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 4:45 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
အကြောင်းအရာ ဘာသာပြန် မိန့် ခွန်း
ရာစုနှစ်တစ်စိတ်ဆိုသော အချိန်ကာလမှာ အရာများစွာတို့ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်။ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တစ်ဦး ပညာပြည့်စုံပြီး လူလားမြောက်နိုင်သည့် ကာလဖြစ်သည်။ စနစ်များ၊ ခေတ်များနှင့် လူနေမှုပုံစံများလည်း ရွေ့လျား သွားနိုင်လောက်သော ကာလဖြစ်သည်။ လူ့အချို့တို့ကို နောက်ဆုံးဇရာ အရွယ်သို့ ရောက်ရှိစေနိုင်ပြီး မိတ်ဆွေအချို့မှာ ရှိနိုင်တော့မည်လည်း မဟုတ်ပါ။ အကောင်းဖက်သို့ ဦးတည် တည်ဆောက်ခဲ့မည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ၂၃ နှစ်တာ ကာလမှာ များစွာ ခရီး ရောက်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ…။
မောက္ခ ပညာရေး မဂ္ဂဇင်းမှဖေါ်ပြပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 1:52 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ပြန်/ဆက် ညွှန်ချုပ် ဦးရဲထွဋ်နှင့် အော်စလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း /ရုပ်/သံ
အကြောင်းအရာ သတင်း /ရုပ်သံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနား/ ရုပ်/သံ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 12:43 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Amnesty International အဖွဲ့မှ Ambassador of Conscience ဆု ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနား ရုပ်သံ ၁+၂
မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Amnesty International မှ ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုတဲ့ "Ambassador of Conscience" Award နဲ့အတူ U2 တေးဂီတအဖွဲ့ က တင်ဆက်ဖြော်ဖြေခဲ့တဲ့ Electric Burma Concert (အပိုင်း ၂)။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 12:46 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
နော်ဝေရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား မျိုးပေါင်းစုံနှင့် နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ၌ သီးသန့်တွေ့ဆုံရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း /ရုပ်/သံ)
နော်ဝေနိုင်ငံ Nobel ဆုပြန်လည်ပေးအပ်ပွဲသို့ တက်ရောက်သော အမေစုမှ နော်ဝေရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ သီးသန့်နှင့် Nobel Peace Senter တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားသော အမေစု၏ မြန်မာလို မိန့်ခွန်း။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလာရောက်သူများ အားလုံးနားထောင်လို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်သလိုလည်း Share နိုင်ပါတယ်။ နော်ဝေမှာ နေလာခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အပျော်ဆုံးနေ့ တစ်နေ့ပါပဲ။ အိမ်ရှင်နော်ဝေသားများရှေ့ အထူးတန်းကနေ မြန်မာများအားလုံးကို အမေ့မျက်နှာနဲ့ နေရာပေးခဲ့လို့ပါ။ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာများလည်း နော်ဝေရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသားများလို တန်းတူ အခွင့်အရေးများ ရကြပါစေ။ အမေစု ကျန်းမာပါစေ။ အမေစု ကျန်းမာပါစေ။ အမေစု ကျန်းမာပါစေ။
Published on by HeinSet21
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 1:50 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် /ရုပ်/သံ
Aung San Suu Kyi gaveagreat speech in Oslo, Norway on 16 June 2012. Live on TV ABC24. The second part of this record is at: http://youtu.be/IHN5bKLqDCY and the TV commentary at the end: http://youtu.be
Published on Jun 16, 2012 by polladach
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:13 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
၁၄-ဇွန်-၂၀၁၂၊ ဂျနီဗာ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ချုပ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း /ရုပ်/သံ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 1:56 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ILO ညီလာခံတွင်ရောက်ရှိနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံ သတင်း
အလုပ်မရှိတာထက် မျှော်လင့်ချက်မရှိတာ ပိုဆိုးတယ် ။ပြည်သူ့မိခင် အမေဒေါ်စု
မြန်မာလူငယ်အများစုမှာ အလုပ်မရှိတာထက် မျှော်လင့်ချက် မရှိတာက ပိုဆိုးတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသွားပါတယ်။
၀းတက်ရောက်သူများကို နှုတ်ဆက် နေစဉ် Photo: AP
သတင်းထောက်များအားဖြေကြားချက် များကို facebook မှစုစည်းတင်ပြချက်.....
ယနေ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ILO ညီလာခံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သတင်းထောက်တယောက်က ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံပါသလားဟု မေးရာ ၎င်းက နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် ရှင်းလင်းသည့် ဥပဒေများ ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် – မြန်မာနယ်စပ် ၂ ဘက်စလုံးတွင် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းသည် ကြီးမားသည့် ပြဿနာဖြစ်ကြောင်း၊ တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်မှုများ အမြဲတမ်းရှိနေကြောင်း ဖြေကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်တွင်း လူ ၂၀ ကျော် သေဆုံးမှု ပဋိပက္ခနှင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိပါးစေသော ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရမှုများကို မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်နည်း ဆိုသော မေးခွန်းအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတွင်း ပဋိပက္ခများ အဆုံးသတ်ရန် မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်သည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အဓိကအရေးကြီးသည်ဟု ထင်ကြောင်း ဥပဒေ ရှိယုံတင်မကဘဲ ကိုယ်တိုင်က ထိမ်းသိမ်းလိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကသာ လူတိုင်းအပေါ် အကာအကွယ် ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ယခု ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်မှုသည် သိမ်မွေ့လှပြီး ကိုင်တွယ်ရာ၌ ထိရှလွယ်ကြောင်း၊လူတိုင်း၏ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုလည်း လိုအပ်ကြောင်း၊ တနိုင်ငံလုံးတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဖြေကြားသွားသည်။
စစ်တပ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးပါတယ်
အောင်ဆန်းစုကြည် - တိုင်းပြည် တစ်ပြည်ရဲ့ စစ်တပ် ဆိုတာ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ စစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်သလဲဆိုတာ တိုင်းထွာဖို့လိုပါတယ် စစ်တပ်ရဲ့ အဓိက တာဝန်က ပြည်သူတွေ ကို လုံခြုံမူပေးနိုင်ဖို့ ကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်.. စစ်တပ်ဟာ ပြည်သူကို ကာကွယ်ရပါမယ်၊ မအုပ်ချုပ်ရပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်သလားလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂျီနီဗာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက် တယောက်က မေးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဟာ အလွန့်အလွန်မှကို အရေးကြီးတယ်၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တိကျတဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိဖို့ လိုတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ ၀င်ရောက်နိုင်လို့ တချိန်လုံး တရားမ၀င် ၀င်ရောက်သူတွေ ရှိနေတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် အလိုအပ်ဆုံးကတော့ အကျင့်မပျက် လာဘ်မစားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ နယ်စပ်ကို မပြတ်စောင့်ကြည့် စောင့်ရှောက်သွားဖို့ လိုတယ်လို့ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျနီဗာ အိုင်အယ်လို မှာပြောကြားသေား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့် ခွန်း
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:40 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁၇ ရက်ကြာ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ ခရီးစဉ် စတင် (ရုပ်/သံ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်ကို စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၄၅ နာရီအချိန်မှာ ထိုင်းအဲယားဝေး (TG) လေယာဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ စတင်ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ကို ဦးစွာ သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကနေ တဆင့် နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ကို ၁၈ ရက်ကြာ သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို မိသားစုနဲ့အတူ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါက်တာတင်မာမြင့်၊ ဦးခွန်သာမြင့်၊ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်နဲ့ ဦးနေခြည်ဝင်းတို့ လိုက်ပါသွားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်ကို စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၄၅ နာရီ အချိန်မှာ ထိုင်းအဲယားဝေး (TG) လေယာဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာလေဆိပ်ကနေ စတင် ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ကို ဦးစွာ သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကနေ တဆင့် နော်ဝေးနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့၊ အိုင်ယာလန် နိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၊ ပြင်သစ် နိုင်ငံတို့ကို ၁၈ ရက်ကြာ သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို မိသားစုနဲ့အတူ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါက်တာ တင်မာမြင့်၊ ဦးခွန်သာမြင့်၊ ဦးဖြိုးဇေယျာသော် နဲ့ ဦးနေခြည်ဝင်းတို့ လိုက်ပါသွားတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါသည်။
face book သတင်းများအားကောင်းနှုတ်ဖေါ်ပြပါသည်။
မိဘပြည်သူများသို့ ပြောကြားခဲ့သော နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းအပြည့်စုံ /ရုပ်/သံ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:18 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ထိုင်းခရီးစဉ်အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ ဒေါ်စု ပယ်ချ....
မေလ ၂၉ ရက်နေ့ကနေ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက် ဆက်တွဲ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရော မကြာခင်မှာ သွားတော့မယ့် ဥရောပခရီးစဉ်တွေ အပါအ၀င် အကြောင်းအရာ အတော်များများကို ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့က NLD ရုံးချုပ်မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
By ကိုကျော်ကျော်သိန်း (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း)
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 4:58 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ် အံ့သြဖွယ် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အဖြစ် နိုင်ငံတကာ၌ ယူဆလာနေ
by General Knowledge facebook မှ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 5:15 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ဧည့်ဝတ်မပြုရန် မြန်မာသံရုံးမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသို့ ဖိအားပေးခဲ့သည်မှ စ၍ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်စဉ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဥရောပခရီးစဉ်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိနိုင်....